नेपालको राष्ट्रियतामा धावा बोल्ने जी न्यूजलाई कुन गिरोहले पुर्‍यायो बालुवाटार? – Himalitimes
नेपालको राष्ट्रियतामा धावा बोल्ने जी न्यूजलाई कुन गिरोहले पुर्‍यायो बालुवाटार?
२०७७ पुष २९ १०:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट संरक्षित मोदी मिडियाको विल्ला पाएको जी न्यूजको एक टोली यही साता प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा पुग्यो।
नेपालको राष्ट्रियता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको खुलियाम मानमर्दन गरिरहेको जी न्यूज टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन वालुवाटारमा न्यानो स्वागत गरे? नेपाल विरोधी जी न्यूजको टोली प्रधानमन्त्रीसम्म कसरी पुग्यो? नेपालका प्रसारण बन्द गरिएको टेलिभिजनलाई प्रधानमन्त्रीले किन अन्तर्वार्ता दिए?
यो बिषय शंकाको गर्भमा बसिरहेका बेला जी न्यूजका सम्पादक चौधरीले नेपालको राष्टियतामाथी अर्को धावा बोलेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट सगरमाथा आधार शिविरमा पुगेका चौधरीले नेपालीहरुको शान सगरमाथामाथी नै धावा बोलेका छन्। सगरमाथामाथी भारतले पनि दावी गर्नुपर्ने तर्कसहितको टेलिभिजन रिपोट प्रशारण गरेका छन्। उनले भारतीय एक सर्वेक्षकका नाममा सगरमाथाको नाम राखिनु पर्ने तर्क पनि गरेका छन्। विश्व सामु सगरमाथामाथी भारतले पनि दावी पेश गर्नु पर्दछ र यसको नाम राधानाथ सिकिदर राख्नु पर्दछ, उनले टेलिभिजन रिपोटमा भनेका छन्।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भुभाग भारतले अतिक्रमण गर्दादेखि नै नेपालमाथी धावा बोल्दै आएका चौधरीले सगरमाथामाथी पनि धावा बोलेका छन्। सगरमाथा आधार शिविरबाट उनले यस्तो भनेः
म भन्न चाहन्छु कि माउन्ट एभरेस्टमाथि भारतको पनि दाबी हुनुपर्छ।
यो माउन्ट एभरेस्ट आरोहण गर्ने दुई मार्ग छन्, एउटा नेपालको तर्फबाट, अर्को चीनतर्फबाट। खासमा तिब्बतबाट हो, तर तिब्बतलाई चीनले आफ्नो भनी दाबी गर्छ। त्यसैले यो शिखरभन्दा उतापट्टि चीनबाट पनि माउन्ट एभरेस्ट आरोहण गर्न सकिन्छ। यो बाटो पनि छँदैछ।
आज म यहाँ उभिएर भन्न चाहन्छु कि भारतसँग माउन्ट एभरेस्टको के साइनो छ? वर्ष १८५२ मा राधानाथ सिकदरले पहिलोपटक माउन्ट एभरेस्टको उचाइ मापन गरेका थिए। सर्भे अफ इन्डियाले उनलाई यो जिम्मेवारी दिएको थियो। उनलाई आदेश थियो –तपाईं जानुहोस् र माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापेर आउनुहोस्।
राधानाथ सिकदर बंगालका प्रख्यात गणितज्ञ थिए। उनले माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापे। माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नाप्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति थिए। भारतमा त्यसवेला अंग्रेजको शासन थियो, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो हिसाबले नाम राखिदिए। एन्ड्रयु वा जो जर्ज एभरेस्टका उत्तराधिकारीको रूपमा सर्भे अफ इन्डियाको प्रमुख थिए। उनले यो शिखरको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखिदिए।
हामी भन्न चाहन्छौं कि यो शिखरको नाम राधानाथ सिकदरको नामबाट राखिएको हुनुपथ्र्यो। आज हामी भन्न चाहन्छौं, यो शिखरको नाम राधानाथ सिकदरको नामबाटै हुनुपर्छ। भारतले यसका लागि अभियान चलाउनुपर्छ, भारतका जनताले पनि अभियान चलाउनुपर्छ। हामीले पनि माउन्ट एभरेस्ट माथि आफ्नो दाबी पेस गर्नुपर्छ, पूरै दुनियाँका सामुन्ने।
म आज राधानाथ सिकदरलाई याद गर्दछु। तपाईंहरू सबैको तर्फबाट, पूरै भारतवासीको तर्फबाट। उनले नै यो शिखरलाई पहिलोपटक मापन गरेका हुन्। यति ठूलो काम उनले गरे। त्यसैले माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ।’
नेपालको राष्टियतामाथी धावा बोल्ने जी न्यूजका टोलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कसले पुर्‍यायो? भारतीय खुफिया गिरोहले सुधीर चौधरी सहितको टोलीलाई बालुवाटारमा पुर्याएको आशंका गरिएको छ। जुन गिरोहले ५ कार्तिकमा भारतीय रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई वालुवाटार पुर्याएको थियो त्यही समुहले चौधरीको समुहलाई पनि वालुवाटार पुर्‍याएको हो।
प्रचण्ड–माधव समूहको आज बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यकता भेला
उपत्यकाका ट्राफिक बत्तीलाई ‘स्मार्ट’ प्रणालीमा लैजाने